Goodax Barre oo gorgortan kula jira R/W CCC xili ,,,,,, |
Goodax Barre oo gorgortan kula jira R/W CCC xili ,,,,,,
Warar lagu kalsoon yahay oo aan ka heleyno dhanka BF Somalia, ayaa sheegaya in C/llaahi Goodax Barre oo ah Sii haayaha Wasaarada arimaha gudaha uu xiligaani gorgortan kula jiro Ra’isul wasaaraha dalka Cumar Cabdirashiid Cali.
Goodax Barre oo saaxib dhow la ahaa Madaxweynaha ayaa waxa ay ku kala irdhooben xulashada xukuumadii maalmo ka hor uu soo yagleelay R/W CCC, waxa uuna xiligaani u muuqdaa inuu dadaal adag ugu jiro sidii uu ku xaqiijin lahaa hadafkiisa oo ah inuu ka dhex muuqdo Xukuumada soo socta, inkastoo ay caqabad heysato.
Goodax Barre ayaa waxa uu kamid ahaa shaqsiyaadka kasoo horjeeday Liiska Golaha wasiirada ee uu soo dhisay CCC, hayeeshe waxa uu iminkana muujinayaa inuu dib uga mid noqdo Wasiirada soo socda.
Ka sokoow kamid ahaanshihiisa Xukuumada Cusub, ayaa waxaa jira in Xildhibaanada BF ay Ololo ugu jiraan si aan Xukuumada cusub loogu soo darin Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka, kadib markii ay ku micneeyen mid sababi kara Khilaaf aan xal laheyn.
Dhanka kale, Ra’isul wasaare CCC ayaa lagu wadaa in mudada kooban ee uu heysto uu kusoo yagleelo Xukuumad ka tayo badan tan iminka uu kala diray.